Ukukhishwa okufakiwe C10 kungenye yemikhiqizo esetshenzisiwe kakhulu ekwakhiweni kwezenhlalakahle nezezimboni. Iphrofayli evunyelwe kakhulu evame ukusetshenziswa ekwakheni izindlu ngabanye. Lezi zinto zathola ukuthandwa kakhulu hhayi ngenxa yezindleko zayo eziphansi uma kuqhathaniswa nama-analogues, kodwa futhi ngenxa yokuhlanganiswa okuphumelelayo kokukhanya namandla, kanye nokukhululeka kokufakwa. Lokhu kukuvumela ukuthi ungagcini nje kuphela ngesikhathi sokuthenga, kodwa futhi nasenkonzweni yomsebenzi wokwakha.
Esinye sezizathu zokuthandwa okuphezulu, okuye kwafakazela i-C10, kuyindlela ehambisana nayo. Le nto isetshenziselwa cishe zonke izindawo zokwakhiwa: ukufakwa kokuphahleni, ukwakhiwa kwezakhiwo ezakhiwe ngezakhiwo nezakhiwo, ifreyimu, udonga oluswakanyisiwe kanye nezakhiwo zeplanethi, izicingo, izicingo, ukufakwa kwamapulangwe, kanye namapulangwe ezithandwayo.
Uma kudingekile ukubeka i-C10 njengodonga lokukhwabanisa, i-crate kufanele ihlelwe kuqala, isinyathelo esiphakathi kwezakhi sibe ngamamitha angu-0.5 (kodwa angaphezu kuka-0.8). Lesi sibalo sifanele ukuphahla nge-angle enkulu. Ibhodi ehlanganisiwe i-C10 ikhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zikahulumeni Р 52246-2004 ngokusetshenziswa kwensimbi eboshwe ebanda, evikelwe ngengubo evuthayo ye-zinc. Okuthandwa kakhulu yi-C10 enengubo ye- polymer. Ingqimba yokuzivikela yokuhlobisa yenza izinto zikhangise ngaphandle bese zandisa ukuphila kwephepha elifakiwe. Uma uthengiswa ungathola ibhodi ekhonjiwe yebanga C10 ngesembatho esisodwa, lapho kusetshenziswa khona i-lacquer ekhethekile ngaphakathi. Ishidi elinophelela ngamaceleni amabili lisetshenziselwa ekwakhiweni kocingo, okuvumela ukuhlinzeka ucingo olufanayo lwezobuciko ezinhlangothini zombili. Kulezi zitolo, i-C10 ekhishwe ngomshini we-sheeting igcwaliswa kusuka kubakhiqizi abathile, obhekene nokubunjwa okuhloswe futhi kuhloswe ukwakhiwa kwezicingo zezakhiwo zokuhlala.
Uma ufuna ukukhetha indaba efanele, kufanele uqaphele izinombolo ezikhonjiswe eceleni kokumaka. Isibonelo, ungasebenzisa i-C10-1000-0.6, lapho uzofunda ukuthi ngaphambi kwakho ishidi lamadonga elinokuphakama kwe-trapezium ka-10 mm. Ububanzi obuwusizo bewebhu buyi-1,100 mm, futhi ubukhulu besensi bulingana no-0,6 mm. Umthengi wanamuhla unikezwa ukuthenga impahla emakwe uphawu lwe-C10-1000-0.5 kanye neshidi elifakiwe le C10-1000-0.7. Okwokuqala kwalokhu kunamaqabunga e-0.5 mm, kanti ubukhulu besibini buyi-0.7 mm. Imitha eyodwa yesigcawu seshidi elifakiwe elinobuncane obukhulu lilinganiselwa ku-4.6 kg, kodwa ishidi le-0.7 mm lizoba nesisindo esingu-6.33 kg.
Naphezu kweqiniso lokuthi umehluko phakathi kohlobo lwezinto ezibonakalayo awunaki (lesibili sinesisindo esingu-1.73 kg ngaphezu kweyokuqala), sandisa umthwalo ohlelweni, ikakhulukazi ukuphakama okukhulu kokuphahla. Ngakho-ke, ukuthola i-sheeting ekhonjiwe nge-C10, kubalulekile ukubala indawo ophahleni, okuzophazamiseka isici se-snow load esifundeni esithile. Ubukhulu beshidi buhlukile ebubanzi bomsebenzi wokuqala. Le parameter ingaba ngu-1 000, i-1 100 noma i-1 250 mm. Kukhona ububanzi obuwusizo, obulingana no-900, 1,000 no-1,100 mm.
Isisindo sokwaziswa, kuye ngokuthi ubukhulu bungakanani
I-sheeting efihliwe i-C10, isisindo sayo sihlukahluka kuye ngokuthi ubukhulu bunjani, bunobuningi bensimbi, obulingana no-7 800 kg ngamamitha ayi-cubic cubic.
Enye imitha ehambayo yomkhiqizo izoba nesisindo esingu-4.45 kg uma ubukhulu beshidi bungu-0.4 mm. Ngesikhathi esifanayo, kuyoba ne-4 kg ngemitha yesikwele.
Njengoba ukwanda kwe-thickness kuya ku-0.45 mm, isisindo siyoba yi-4.05 kg m 2 no 4.78 kg per p / m.
Ukuphakama kweshidi ka 0.5 mm kunikeza isisindo esilingana no 4.6 kg per m 2 no 5.4 kg ngamunye imitha egijima.
Umkhiqizo we-0.55 mm unezinkomba ezilandelayo: m 2 - 5.4 kg, futhi p / m ulinganiselwa ku-5.9 kg.
Ngokunyuka okuncane kobunzima kuya ku-0.6 mm, imitha ehambayo yomkhiqizo izoba nesisindo esingu-6.4 kg, nomitha wesikwele - 5, 83 kg.
Ishidi 0.7 mm linesisindo sika 6.33 kg ngemitha yesikwele ngasinye, nesisindo se-p / m ngu-7.4 kg.
I-sheet sheet efihliwe inokuqina nokuqina okunye, okwakutholakala ngenxa yokubola okujulile kwe-10 mm. Lokhu kuvumela ukusetshenziswa kwendwangu yokwakha izakhiwo nezakhiwo zinkimbinkimbi ephezulu. Le nto ayimelene nokubola, futhi ukumbozwa kwe-polymer kwandisa ukuqina kokusebenza. Iphrofayela yeqabunga iyonona, futhi iyamelana nanoma yisiphi isimo sezulu. Ngaphandle kwengubo, ingasetshenziswa ukwenza amafomu agcwalise ukhonkolo ngesisekelo. Ukuthola ibhodi le-C10 eboshiwe, izici zobuchwepheshe ezikhuthaza abathengi ukuba bakhethe ukuqondisa, uthola ithuba lokusebenzisa kabusha umshini, ugcine imali. Le ndaba kulula ukuyifaka, kulula ukusika nokugaya, okusiza umsebenzi wamaqembu wokufaka.
Ukukhishwa okufakiwe C10, intengo ezohluka ngokuya ngobukhulu, ihlinzekwa ngezingubo zokugcoba nezombumba.
Esikhathini sokuqala, umkhiqizo obuncane kakhulu (4 mm) uzobiza ama-ruble angu-196. Ukuze imitha egijima.
Njengoba ukwanda kwe-0.5 mm ukuphakama, intengo iyanda kuma-ruble angu-229. I-p / m.
Uma unesithakazelo ebukhulu be-0.55 no-0.7 mm, khona-ke imitha yalezi zincwadi kuzodingeka ukhokhe ama-ruble angu-249 no-307. Ngokulandelanayo.
Intengo izokwanda uma ishidi elibolekiwe libopha i-polymer. Ukuthengisa lokhu kuvezwa ezinhumulweni eziningana - ngobukhulu be-0.4 mm, futhi futhi no-0.5 no-0.7 mm. Esikhathini sokuqala, izindleko yi-ruble angu-228. I-p / m. Ukuze uthole ishidi elingama 0.5 mm ubukhulu, kuzodingeka ukhokhe ama-ruble angu-268. Futhi imitha yebhodi eliyisikhombisa-millimitha elihlanganisiwe - ama-ruble angu-368.
Izici zokusetshenziswa kwebhodi eliboshwe
Insimbi ehlanganisiwe ingafakwa cishe cishe noma yikuphi uphahla. Ibanga eliphakathi kwezigqoko kufanele lilingane nomkhawulo we-600 kuya ku-900 mm. Phakathi kwamashidi kukhona ama-rivets agqamile okugcoba, futhi ukubeka phezu kophahla kufanele kube ukulungiswa kwezikhonkwane zokuphahla. Kubo, izimbobo zenziwa kuqala. Uma ukuthengisa kungatholakali ukufakwa kwesakhiwo somthunzi ofanelekile, khona-ke izikrini zingashintshwa nge-screws enekhanda lehektare. Kufanele ukhethe izinsimbi zokugqoka nge-plastiki noma i-rash washer. Uma unquma ukusebenzisa le ndlela yokugcina, kufanele uqale ukubopha izimbobo endaweni ephakanyisiwe yezinsimbi, ububanzi obufanele bube ngu-0.5 mm obukhulu kunesibuko. Insimbi eboshiwe akufanele ifakwe ophahleni ngosizo lwezipikili. Ubuchwepheshe abuhlinzekiwe ngesizathu sokuthi ngaphansi kwethonya lezinsipho ezingenakukwazi ukubamba ishidi. Izikrini nezikrini kufanele zifakwe ngokuqondile, okuqeda ukuvuza kwamanzi.
IBhodi lochwepheshe wephepha lokuqinisa
Amashidi ebhodini okonakele afakwe kwi-crate futhi agcinwe ezindaweni lapho igagasi lilandelwa khona. Cishe kube ngu-8 fasteners okuzodingeka ngomitha wesikwele. Kufanele uzame ukugcina ibanga phakathi kwabo elifanayo. Ku-crate yokuqala nokugcina, amashidi anamathele endaweni yegagasi ngalinye, ngoba lezi zindawo zizoba nomthwalo omkhulu womoya. Kumakrethini aphakathi, ibhodi elonakele liqondiswe ngesixhumanisi. Ezingxenyeni ze-longitudinal, isinyathelo esiphakathi kwe-fasteners akufanele sidlule ngamamitha angu-500 mm.
Ishidi eliboshiwe lingagcinwa ngokwezindlela ezimbili ezikhona. Owokuqala uhlinzekela ilungiselelo eliqondile lewebhu, ngenkathi okwesibili kunikezela ukudala ibhokisi leshidi lamathathu. Ukupakisha okusetshenzisiwe kusetshenziselwa imikhiqizo ene-groove ye-drainage. Okokuqala, ishidi lokuqala libekiwe, elihleliwe okwesikhashana, bese kuthiwa ishidi lokuqala lomugqa wesibili. Okulandelayo kuza isendwangu sesibili lomugqa wokuqala. Okulandelayo, kufanele ufake ishidi lesibili lomugqa wesibili. Lokhu kuzokunika ibhuloho lezingxenyana ezingu-4, okumele kube yilokho okumele kulungiswe futhi kugcinwe ekugcineni.
Uma ufuna ukuqinisa ishidi eludongeni, kufanelekile ukusebenzisa iphrofayili yombhalo wensimbi. Okokuqala, amaphrofayli aqondile ahleliwe, okumele aqondiswe kubakaki abanjwe ngaphambili, khona-ke amabhuloho aphezulu kufanele afakwe phakathi kwawo. Indawo yabo kufanele ibe lula. Ngenkathi isakhiwo sefreyimu sesilungile, kungenzeka ukuthi uqale ukulungisa udonga olufakwe ngodonga ngokusebenzisa izikrini zokubamba.
I-Valve iphendulela ukuphuma kwe-ventilation: ukubukeka kanye nobubanzi
8 alungise izinwele ngendlela ephelele ehlobo
Imithandazo ukwesaba nokukhathazeka emphefumulweni wami umbhalo, ukusebenza kanye nokubuyekeza